ဖုန်းနည်းပညာ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ဖုန်းနည်းပညာ. Show all posts
ဖုန်းတွေမှာ အင်တာနက် ၀ိုင်ဖိုင် ဘာကြောင့် အော်တို ပွင့်နေတာ ဖြေရှင်းနည်း
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတို့ ကြားနေရ မြင်နေရတာ ရှိမှာပါ ...
အဲဒါက ဘာလည်း ဆိုတော့ အင်တာနက် ပိတ်ထားလည်း အော်တို ပွင့်တယ် ၀ိုင်ဖိုင် ပိတ်ထားလည်း အော်တို ပွင့်တယ်။ ဒီထက် ဆိုးတာ ဆိုရင် အင်တာနက် သုံးလိုက် တာနဲ့ ဆောစ်ဝဲ တွေကို အော်တို Download လုပ် notifications မှာလည်း ဖျက်မရ Format ချလည်း ဖြစ်မြဲတိုင်း ဖြစ်ပြန် ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိ ဆိုင်သွား ပြရင်လည်း ပိုက်ဆံ ကုန်အုံးမယ်။
တကယ်တော့ အဲဒါလေးဖြေရှင်းဖို့က လွယ်လွယ်လေးပါ အဲဒါက ဘာကြောင့် ဖြစ်သလည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော် တွေ့ဘူး သလောက် ထင်မြင်ချက် လေးပါ facebook သုံးရင် တွေ့ကြမှာပါ။
DU Speed Booster (Cleaner) Holo luncher အခြား အချို့သော Free ဆောစ့်ဝဲလ်တွေ ကြာင့်ဖြစ်တာပါ။
နောက်ပြီးတော့ sexy apk တွေကြောင့်လည်း ပါတယ် ထားလိုက် ပါတော့ ဘာကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်လာရင် ကြုံလာရင် ဘယ်လို လုပ်မလည်း ဆိုတာ ပြောပြ ပါမယ်ခင်ဗျာ
အဲဒီလို ကြုံလာရင် မိမိဖုန်းက root လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ် မလုပ် ရသေးရင် လုပ်လိုက်ဗျာ
လုပ်လို့ မရဘူး ဆိုရင်တော့ Firmware တင်တဲ့ နည်း တစ်နည်းဘဲ ရှိတယ်
Root ထားပြီးသား ဖုန်းဆိုရင် securit တစ်ခုခု ဒေါင်းပြီး ဖုန်းထဲကို Install လုပ်လိုက်ပါ
နမှုနာအနေနဲ့ 360 Security သွင်းလိုက်မယ် ဘယ် Security ဆောစ်ဝဲလ် သွင်းသွင်း, သွင်းပြီးရင် Root Accect ရအောင် လုပ်ပါ ပြီးရင် ဖုန်းထဲမှာ ဗိုင်းရပ် စစ်ပါ စစ်တဲ့ အချိန်မှာ အင်တာနက် ဖွင့်ထားပါ အဲဒါမှ စစ်တဲ့ အခါ တွေ့ရမှာမို့လို့ပါ။
360 Security နဲ့ နမှုနာ စစ်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ Root မရှိလည်း စစ်ရင် တွေ့ရတယ် ဖြုတ်လို့ မရဘူး
တွေ့ရင် သူဖြုတ် ခိုင်းတာတွေ အကုန်ဖြုတ် လိုက်ပါ ဖြုတ်ပြီးရင် ဖုန်းကို Restart လုပ်ပြီး ပြန်စစ်ပါ
သုံးခေါက်လောက် စစ်လိုက်လို့ မတွေ့တော့ ရင် မိမိဖုန်းက လုံးဝ ကောင်းသွားပါပြီ။
အဆင်ပြေကျပါစေ မပြေရင်လည်း ကွန်မန့်ပေးသွားပါဗျာ ပြောပြပါ့မယ်
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/blog-post_27.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 31, 2015 1 comment:
သင့်ရဲ့ မျက်နှာကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းကို Unlock လုပ်နိုင်ရင် Passcode , PIN တွေ ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှု ကင်းဝေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Settings>Security> Screen Lock ထဲသွားပြီး Face Unlock ကို Enable လုပ်ပါ။ ပြီးရင် ဖုန်းက သင့်မျက်နှာကို အရှေ့ဘက် ကင်မရာကနေ Scan ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး သင့်မျက်နှာကို မှတ်သား ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Scan ပြုလုပ်ရာမှာ မတူညီတဲ့ အလင်းရောင် အခြေ အနေများဖြင့် သင့်မျက်နှာကို ခွဲခြား မှတ်သား ထားမှာပါ။ အဲဒီ အတွက် နေ့ဘက်တွင် ဖြစ်စေ၊ ညဘက်တွင် ဖြစ်စေ ဖုန်းက သင့်မျက်နှာကို ကောင်းစွာ ခွဲခြားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့ အားနည်းချက်က တစ်စုံ တစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ ဓါတ်ပုံ တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းကို Unlock လုပ်နိုင်တာကို သတိပြုပါ။
App Runtime ဟာ သင့်ရဲ့ Apps များကို မောင်းနှင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Lollipop မှာ Google က ယခင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Dalvik Runtime ကို ဖယ်ရှားထားပြီး ပိုမို စွမ်းရည် ပြည့်ပြီး ချောမွတ်တဲ့ ART Runtime ကို အသုံးပြု ထားပါတယ်။ ART ကို KitKat မှာ အသုံးပြုနိုင် ပေမယ့် Default အားဖြင့် Enable လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကိုပြောင်းဖို့ အတွက် Settings> Developer Options ထဲသွားပြီး Select Runtime မှာ ART ကို ရွေးချယ် ပေးပါ။ Reboot ပြုလုပ်ပြီးရင် သင့်ရဲ့ Apps များဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ် လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Original link - http://www.myanmardigitallife.com/?p=4191
ကဏ္ဍ Android, ဖုန်းနည်းပညာ
Android ဖုန်းရဲ့ Memory Space အတွက် ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်များ
ကျွန်တော်တို့ Smart Phone အသုံးပြုနေ ကြတဲ့ လူတွေ ထဲမှာ ရံဖန်ရံခါ Memory Space မလုံလောက်တဲ့ ပြဿနာ နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြ ရပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ Built in Memory Space ကလည်း အတော် အသင့်အသုံးပြု နိုင်တယ်။ ဒ့ါအပြင် ဖုန်းမှာ Memory အသုံးပြုမှု များစေမဲ့ Application နဲ့ Data တွေကို အသုံးပြု မထားဘူး။ ဒါပေမဲ့ Memory Space က မလောက်တော့ပဲ Space လိုနေတယ်ပဲ ပြနေတယ် ဆိုရင် သင့်အတွက် စိတ်ညစ် စရာတွေဖြစ် လာပါတယ်။
အလွယ်တကူ Memory SD Card ကို ထပ်တိုး လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပေမဲ့ အချို့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် Memory SD Card ထပ်တိုးရန် အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြတဲ့ လူတွေ အတွက် နည်းလမ်း အချို့ကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
ကိုယ် install လုပ်ထားတဲ့ Application တွေကို အသုံးမပြုဖြစ်ဘူး ဆိုပေမဲ့လည်း Application ရဲ့ Cache တွေက ဖုန်းရဲ့ Memory Space ကို နေရာ ယူထား ပါတယ်။ ဒါတွေကို စစ်ဖို့ အတွက် Android ရဲ့ Setting ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Storage ထဲမှာ အကြမ်းဖျဉ်း သွားရောက် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Disk Usage (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.diskusage) လို့ခေါ်တဲ့ Application နဲ့လည်း စစ်ဆေးနိုင် ပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီးတဲ့ အခါ ရလာတဲ့ အဖြေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဘယ်အရာက Memory ပိုစားနေလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ရှုပြီး ဖြတ်သင့် ပါတယ်။ မိမိ Install လုပ်ထားတဲ့ Application တွေက Memory Space အတွက် နေရာယူမှု များနေတယ် ဆိုရင် တော့ Application ရဲ့ Cache ကို ရှင်းလင်း သင့်ပါတယ်။ Application ရဲ့ Cache ကို ရှင်းလင်းဖို့ အတွက်တော့ Setting ထဲက Application Manager ထဲမှာ သွားရောက် ရှင်းလင်းနိုင် ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဓါတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ အချို့ Data တွေကို cloud storage ကိုအသုံးပြု သိမ်းထားပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Cloud Storage တွေ အလကားပေးထားတဲ့ IT Company တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကို Cloud ပေါ်တင်ဖို့ အတွက် မကြာသေးမှီ ကမှ ကြေငြာခဲ့တဲ့ Google Photo နဲ့ အခြား Data တွေကို Cloud ပေါ် တင်ထားနိုင်တဲ့ Dropbox, OneDrive နဲ့ Google Drive စတဲ့ Application တို့ကို အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ မိမိဖုန်းရဲ့ Memory Space ကို ဂရုစိုက် တတ်တဲ့ မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များဖြင့် ဖုန်းရဲ့ Memory space ပြဿ နာကို ဖြေရှင်းနိုင် ပါတယ်။
ကဏ္ဍ နည်းပညာဆောင်းပါး, ဖုန်းနည်းပညာ, လမ်းညွှန်
SC8620 အမျိုးအစားသုံး ဖုန်းများအတွက် Reset ချနည်း။
SC8620 သုံးထားတဲ့ China Hanset များအပြင် Recovery ၀င်မရတဲ့ ဖုန်းတွေ အတွက် Pattern Lock တို့ Pin Lock တို့ ကျနေတဲ့ အချိန် reset ချနိုင်ရန် တစ်ခါ တင်ပေး ထားဖူး ပါတယ်။
အခု နောက်ပိုင်း SC8620 အမျိုးအစား သုံးထားတဲ့ My Phone တို့ Mobilo စတဲ့ ဖုန်းတွေ ထွက်လာတဲ့ နောက်ပိုင်း Screen Lock မေ့နေကြတဲ့ အခါ ပြန်ဖြည်ဖို့ တော်တော် အဆင်မပြေ တွေ့ရ ပါတယ်။
PC နဲ့ ချိတ်ပြီး software တွေနဲ့ ဖြည်ဖို့ အတွက် ကျတော့လဲ Debugging on မထားမိလို့ အဆင်မပြေ။ Recovery mode ၀င်ဖို့ အတွက် ကျပြန်ရင်လဲ Android ကောင်လေး ပေါ်လာပြီး recovery mode ကို မရောက်နဲ့ အဆင်မပြေ တာတွေတွေ့ နေလို့ပာ အရင် တင်ထားဖူးတဲ့ post အပောာင်းလေးကိုပြန်တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
သူ့ကို reset ချရန် အတွက် လိုအပ်တာ ကတော့ Wipe_userdata လေးပါပဲ။ ကျတော်လဲ အရင် က သူများဆီက ရထား တာလေးပါ။ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။
လုပ်ပုံ လုပ်နည်း ကလဲ လွယ်ကူပါတယ်။
အရင်ဆုံး Computer ကနေ ResearchDownload ဆိုတဲ့ Downloader file လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Wipe_userdata ကို ထည့်ပေး ရပါမယ်။ ResearchDownload ရဲ့အပေါ်ဆုံးက အရင်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ စက်သွားပုံလေးကို Click လိုက်ပါ။
Box လေးတစ်ခု ကျလာ ပါမယ်။ အဲဒီ ကနေပြီး မိမိ Download ရယူထားတဲ့ Wipe_userdata လေးကို လမ်းကြောင်းလေး ရွေးပြီး ထည့်ပေး လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Play logo လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒီအဆင့်ထိ ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Screen Lock ကျနေတဲ့ C8620 အမျိုး အစားသုံး Handset ကို Power ပိတ်ပြီး Battery ခဏဖြုတ် လိုက်ပါ။
30 seconds လောက် နေရင် Battery ပြန်တက်ပြီး volume down ကို ဖိထားရက်နဲ့ Computer နဲ့ ဖုန်းကို ချိတ်ဆက် လိုက်ပါ ( USB ကြိုးထိုးလိုက်ပါ။ )
ResearchDownload မှာ အလုပ်လုပ်နေပြီ ဆိုရင် volume down ကို လွှတ်လိုက်ပါ။
ResearchDownload မှာ အလုပ် လုပ်နေ တာပြီးသွားလို့ PASS ဆိုပြီး ပြလာရင်တော့ Reset ချတာပြီးပါပြီ။
Battery လေးပြန်ဖြုတ် / ပြန်တက် ပြုလုပ်ပြီး Power ဖွင့်လိုက်ပါ။
Screen Lock ပြုတ်ပြီး ဖုန်းကို reset ချထားတာတွေ့မြင် ရပါပြီ ခင်ဗျာ။
အပေါ်က data လေးတွေကို လိုအပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အောက်ကလင့်လေး တွေမှာ Download ရယူလိုက်ပါ။
SC8620_Wipe_userdata >>> http://www.solidfiles.com/d/f5e50ef5c8/
ResearchDownload >>> http://www.solidfiles.com/d/bccb5b9520/
SPD Driver >>> http://www.solidfiles.com/d/b44f098887/
Remark >>> Driver မသိခဲ့ပါက SPD Driver လေးကို Run ပေးလိုက်ပါ။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 17, 20153comments:
ကဏ္ဍ Android, Factory reset, ဖုန်းနည်းပညာ
OnePlus2OxygenOS v2.0 Firmware [Download Link & Firmware Installation Tutorial]
OnePlus2ကိုင်သူတွေ အတွက် OxygenOS v2.0 Firmware ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီ Firmware က OnePlus2H2OS Firmware ထက် သုံးရတာ ပိုမြန်ပြီး Google Service Apps တွေလည်း ပါပြီးသားပါ။ OnePlus ကနေ Official ထုတ်ပေး ထားတဲ့ Firmware လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်းက China Edition ဖြစ်နေလို့ Google Service apps တွေ မပါသေးဘူး ဆိုရင် အခုပေး ထားတဲ့ ROM ကိုပြောင်းသုံး သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Google Apps တွေ မပါတဲ့ OnePlus2 (China edition) မှာ ဒီ ROM ကို တင်ကြည့်ပြီး ပါပြီ။ အဆင်ပြေ ပါတယ်။
Firmware ကိုအောက်က Link မှာရယူပါ။
OnePlus2OxygenOS v2.0 Firmware [Download Link]
☺☺☺ – အပေါ်မှာ Download ရယူခဲ့တဲ့ Firmware ဇစ်ဖိုင်ကို ဖုန်းရဲ့ Internal Storage ထဲကို ထည့်ထားပါ။
-ပြီးလျှင်ဖုန်းကို Power ပိတ်ပါ။ Vol Down Key နဲ့ Power ခလုတ်ကို တွဲနှိပ်ပါ။ Recovery ထဲ ရောက်သွား ပါမယ်။ Language သုံးမျိုးနဲ့ ပြပါလိမ့်မယ်။ English Language ကိုရွေးပါ။ (Vol Key များနဲ့ အထက်အောက် ဆင်းပြီး Power Key ဖြင့် Select လုပ်ရ ပါမည်)
☺☺☺ – Install from built-in SD Card upgrade file ကိုရွေးပါ။ ခုနက Storage ထဲမှာ ထည့်ထား ခဲ့တဲ့ Firmware ဇစ်ဖိုင်ကို ရွေးပေး လိုက်ပါ။ OK ကိုနှိပ်ပါ။ Firmware စတင်ပါပြီ။
Firmware တင်ပြီးရင်တော့ ဖုန်းက auto reboot ကျသွား ပါလိမ့်မယ်။ Firmware အသစ်ကို အောင်မြင်စွာ တင်ပြီး ပါပြီ။
Author: သက်နိုင်စိုး August 12, 2015
ကဏ္ဍ 1+1, Android, Firmware, ဖုန်းနည်းပညာ
Accessibility setting ထဲက TalkBack မိနေရင် ဘယ်လို ပြန်ဖြေရှင်း မလဲ ???
Android Phone တွေ မှာရော iOS Phone တွေ မှာရော Customer တွေ တစ်ခါ တစ်လေ ဖြစ်ဖူးတဲ့ Accessibility ထဲက TalkBack မိတတ် ကြတဲ့ အခြေ အနေမှာ ပြန်လည် ဖြေရှင်းနည်း (ပြန်ပိတ်နည်း) လေးကို ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
TalkBack စနစ်ပာာ မသန်စွမ်း သူတွေ အတွက် ဖန်တီး ထားတဲ့ စနစ်လေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်မှု ရှိရင်တော့ လူတိုင်း အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသန်စွမ်း သူတွေမှ လွဲပြီး လူတော်တော်များများ အသုံးပြုခြင်း မရှိတဲ့ စနစ် တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစနစ်လေးကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က စလိုက်လို့ ဒါမှ မပာုတ် အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်က မတော် တဆ လုပ်လိုက် မိတဲ့ အခါ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် on လိုက် မိပြီ ဆိုပါစို့။ အဲဒီ အခါ ကျရင် ကိုယ့်ရဲ့လက်က ဘယ်နေရာ ကိုပဲ ထိမိ ထိမိ အနောက် ကနေ စကားသံနဲ့ လိုက်ရွတ်နေပြီး Touch လဲရွှေ့ မရတော့တဲ့ အခါ တော်တော် များများ User တွေ အနေနဲ့ အခက်တွေ့ တက်ကြ ရပါတယ်။
တော်တော် များများ ကတော့ ဆိုင်ကိုပဲ သွားရောက် ဖြေရှင်း လိုက်တတ် ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ ဆိုင်တွေ ကတော့ ဗပာုသုတ တစ်ခု အနေနဲ့ ပြန်လည် ရှင်းပြပေး တတ် ကြပါတယ်။ ပြောမပြ ပေးတဲ့ ဆိုင်တွေ ဆိုရင်တော့ User တွေ အနေနဲ့ ဘာမှ မသိလိုက် ရဘဲ အဆင်ပြန်ပြေ သွားတာပေါ့။
ကျွန်တော် ကတော့ အခု မသိသေးတဲ့ Mobile Phone User တွေ အတွက် ပြန်လည် ရှင်းပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို အခြေ အနေကြရင် ဘယ်လို ပြန်လည် ဖြေရှင်း ရမလဲ ဆိုရင်တော့ Double Touch စနစ်ကို အသုံးပြု ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Phone Screen Lock ဖြည်တဲ့ နေရာ ဆိုပါစို့။ အဲဒီ ခါကျရင် ကိုယ့် password က 12345 လို့ ပေးလိုက် မိတယ် ဆိုရင် 1 ကိုအရင် တစ်ချက် ထောက်လိုက်ပါ။ 1 မှာ ကွက် လေးနဲ့ ပြပေး ပါမယ်။ နှစ်ချက် ဆက်တိုက် ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် 1 ကို ရွေးလိုက် နိုင်ပါပြီ။ ထိုနည်း အတိုင်းပဲ ကျန်တဲ့ ဂဏာန်း တွေပါ ရွေးချယ်ပြီး Lock ဖွင့် လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ Setting ထဲက Accessibility ကိုသွားပြီး TalkBack ကို ပိတ်ရ ပါမယ်။ Screen ပေါ်က Screen မျက်နှာလေး တွေကို လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ တပြိုင်ထဲ ဆွဲပြီး setting icon လေးထဲ ၀င်လိုက်ပါ။ အပေါ်အောက်ရွှေ့ နိုင်ရန် လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ပဲ ဆွဲလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Accessilibity ကို တစ်ချက် ထောက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Double Touch စနစ်နဲ့ ၀င်လိုက်ပါ။ TalkBack ကို ထပ်ဝင်ပါ။ ပြီးရင်တော့ on/off bar ကို တစ်ချက် ထောက်ပါ။ Double Touch စနစ်လေး နဲ့ပဲ ပိတ်ပေး လိုက်ပါ။ ဒါဆို ရင်တော့ မိမိ ဖုန်းကို ဆိုင်ပြေးနေ စရာမလိုပဲ အဆင်ပြေပြေ ပြန်လည် အသုံးပြု နိုင်ပါပြီ။
Ko Htoo (MMAS)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, June 20, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ နည်းလမ်းများ, ဖုန်းနည်းပညာ
AutoMath Photo Calculator က သင်္ချာ ညီမျှခြင်း တွေကို တွက်ချက်ပြီး အဖြေထုတ် ပေးနိုင်တဲ့ သင်္ချာ App တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အလုပ် လုပ်ပုံက ဒီလိုပါ။ App ကို ဖွင့်ပြီး ဖုန်းရဲ့ ကင်မရာနဲ့ သင်္ချာ ညီမျှခြင်းကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက် တာနဲ့ အဖြေကို တွက်ချက် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ Math Functions ပေါင်း ၂၅၀ ကျော် Built-In ပါရှိပြီး အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု မလိုဘဲ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
AutoMath ကို အင်စတော လုပ်ပြီးရင် App က အသုံးပြုနည်းတွေကို ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက်ကနေ ဘယ်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ညီမျှခြင်း သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုကို ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့ အခါမှာ ညီမျှခြင်းနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကပ်အောင် ဖရိမ်ကို လက်နဲ့ ပွတ်ဆွဲပြီး ချိန်ညှိဖို့ ပြောထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် စာအုပ်နဲ့ ဖုန်းကို အနည်းဆုံး နှစ်လက်မ အကွာကနေ လက်ကိုငြိမ်အောင်ထားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညီမျှခြင်းကိုလည်း ရေပြင်ညီ အနေအထားရအောင် ရိုက်ကူးရပါမယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် Flash Light ကိုဖွင့်ထားဖို့ ပြောပါတယ်။ Default အားဖြင့်တော့ Flash Light ကိုဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ မဖွင့်ပေးထားရင် App ရဲ့ အောက်ခြေမှာ ဖွင့်ဖို့ ခလုတ်ပါရှိပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးတဲ့ ညီမျှခြင်းတွေအတွက် Function ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ပါတဲ့ Calculator ကို အသုံးပြုဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။
နောက်ဆုံး အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်မှာတော့ App က လက်ရေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ ညီမျှခြင်းတွေ၊ Calculus ၊ Complex Fractions ၊ Linear Questions တွေကို မတွက်ချက်ပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။ ပေါင်း၊ နုတ်၊ မြှောက်၊ စားနဲ့ Fractions, Square Roots, Trigonometry, Inequalities, Polynomials, Powers, Algebra, Simplification တို့ကို တွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Close ကိုနှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် App ရဲ့ Main Screen ကို ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ကင်မရာကို ဖွင့်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေထုတ်ချင်တဲ့ ညီမျှခြင်းကို ဘောင်လေးထဲရောက်အောင် ကင်မရာနဲ့ ချိန်ရွယ်ပါ။ ဘောင်ရဲ့ ထောင့်စွန်းတွေကို လက်နဲ့ ဆွဲပြီး ညီမျှခြင်းကိုသာ ပါရှိအောင် ပြုပြင်ပါ။ ချိန်ညှိပြီးရင်တော့ အောက်ခြေမှ Answer ခလုတ်ကို နှိ်ပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် အထက်ပါ ညီမျှခြင်းမှ x ရဲ့ အခြေကို အောက်ကပုံမှာလို တွက်ချက်ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ App က Scan လုပ်လိုက်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေဟာ မှားယွင်းနေတယ်ဆိုရင် အဖြေကလည်း မှားယွင်းနေမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ အဲဒီလို အမှားလေးတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမှာ ဆိုရင် Edit ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ကိန်းဂဏန်းတွေကို အမှန်ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဖြေကို ပြန်လည်တွက်ချက်ပေးမှာပါ။
New ကိုနှိပ်ပြီး နောက်ထပ် ညီမျှခြင်းတစ်ခုကို တွက်ချက်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ညီမျှခြင်း တစ်ခုကိုလည်း အထက်ပါ နည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ပြီး အဖြေထုတ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် x ရဲ့ တန်ဖိုးကို အောက်ကပုံမှာလို တွက်ချက်ပေးမှာပါ။
Main Screen ရဲ့ အောက်ခြေမှာ Calculator ခလုတ်ပါရှိပါတယ်။ အဲဒါကို နှိပ်ရင် ရှုပ်ထွေးတဲ့ ညီမျှခြင်းတွေကို တွက်ချက်နိုင်မှာပါ။ အဲဒီမှာတော့ ညီမျှခြင်းတွေကို လက်နဲ့ ရိုက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ညီမျှခြင်း ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် x ရဲ့ တန်ဖိုးကို တွက်ချက်ပေးမှာပါ။ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှ Functions ကိုနှိပ်ရင်
Built-In ပါရှိတဲ့ Functions တွေကို ပြသပေးမှာပါ။ နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
AutoMath ကို Android 2.3.3 နဲ့ သူ့အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်လို့ ဖုန်းအဟောင်းတွေမှာတောင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Google Play Store မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Original link - http://www.myanmardigitallife.com/
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, ဖုန်းနည်းပညာ
စမတ်ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြု နိုင်မယ့် Apps များ
သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ နှစ်ခု စလုံးဟာ စွမ်းဆောင် ရည်မြင့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်း များပါပဲ။ သူတို့ နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ရင် ပိုတောင်မှ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းအုံး မှာပါ။ USB Cable နဲ့ ချိတ်ဆက် တာကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့် ကွန်ပြူတာနဲ့ စမတ်ဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ပြီး စွမ်းဆောင်ချက် များစွာ တိုးပွားပေးနိုင်တဲ့ Apps များစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ Apps များကို အသုံးပြုရင် ဖိုင်များ ပေးပို့ ရယူတာ၊ ဖုန်းမှ Notification များကို ကွန်ပြူတာမှာ ကြည့်နိုင်တာ၊ စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြုစရာ မလိုဘဲ ဖုန်း Message များကို ကွန်ပြူတာမှ ပေးပို့နိုင်တာ စတဲ့ စွမ်းရည်များ ရရှိနိုင်မှာပါ။
စွမ်းဆောင်ရည် မတူညီတဲ့ App သုံးခုကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ App သုံးခုဟာ Android မှာ အသုံးပြုနိုင် ပေမယ့် အချို့ App များကို iPhone မှာလည်း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ iOS 8 အသုံးပြု သူများအနေဖြင့် စွမ်းဆောင်ချက် အသစ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Handoff ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် iPhone, iPad နဲ့ Mac များကို ချိတ်ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး Mac ကနေ ဖုန်းခေါ်ဆို နိုင်သလို ဖုန်းမှာ ရေးထားတဲ့ အီးမေးကို iPad မှာ လက်စသတ်နိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် အခြား စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်တွေလည်း iOS 8 မှာ ပါရှိ လာပါတယ်။
Pushbullet ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်မှာ များစွာ တိုးတက်လာပါတယ်။ လင့်များ၊ မှတ်စုများနဲ့ ဖိုင်များကို Device များကြားမှာ ပေးပို့နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်များနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Pushbullet ဟာ အခုဆိုရင် သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ရယူနိုင်တဲ့၊ Android မှ Notification များကို ကွန်ပြူတာမှာ ပြသနိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Tool တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။
မိုဘိုင်းဖုန်းများမှာ Pushbullet App ကို ထည့်သွင်းထားရမှာ ဖြစ်ပြီး ကွန်ပြူတာမှာတော့ Chrome နဲ့ Firefox တို့အတွက် Browser Extension များကို အင်စတော လုပ်ထားရမှာပါ။
ကဏ္ဍ ဖုန်းနည်းပညာ, မိုဘိုင်းဖုန်းဆောင်းပါး
သင် အသုံး မပြုသေးတဲ့ Android ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ချက်များ
Android မှာ Tools များစွာနဲ့ နှစ်သက် သလို ပြောင်းလဲ နိုင်တဲ့ Options များစွာ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင် ချက်တွေကို အသုံးပြု သူ အများ စုက မသိမြင်တဲ့ အတွက် အသုံး ချနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အချို့ စွမ်းဆောင် ချက်တွေ ကိုတော့ ထင်သာ မြင်သာ ရှိအောင် ပြုလုပ်ပေး ထားပေမယ့် အချို့ ကိုတော့ လျှို့ဝှက် ထားတတ် ကြပါတယ်။ Power User တစ်ယောက် အနေနဲ့ Android ကို အသုံးပြု ချင်ရင်တော့ လျှို့ဝှက် နက်နဲတဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် တွေကို အသုံးပြုနည်း များကို ရေးပေး လိုက်ပါတယ်။
Smart Lock ကို အသုံးပြုပါ။
သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို လုံခြုံအောင် ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းကို အသုံး ပြု ချင်တိုင်း Pin Code, Pattern တွေ ထည့်ပေး ရတာ အလုပ်ရှုပ် ပါတယ်။ Android 5.0 မှာ Smart Lock ပါရှိလာ ပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းဆောင် ချက်က သင့်ဖုန်းဟာ လုံခြုံတဲ့ အခြေ အနေမှာ ရောက်ရှိ နေရင် အလွယ် တကူ ပွတ်ဆွဲ လိုက်တာနဲ့ Unlock လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ သင့်ဖုန်းဟာ လုံခြုံတဲ့ အခြေ အနေမှာ ရှိသလား ဆိုတာ ဘယ်လို သိနိုင် တာလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းပါတယ်။
Smart Lock ကို Android Device Manager လိုပဲ Play Services ကနေ ထည့်သွင်း ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Locking Options တွေကတော့ Device အလိုက် ကွဲပြား ပေမယ့် Nexus Phone, Tablet မှာတော့ စုံလင် ပါတယ်။ Trusted Face, Trusted Location , Trusted Devices, On-Body Detection စတဲ့ Option တွေ ပါရှိ ပါတယ်။ အနည်း ဆုံးတော့ Trusted Devices, Trusted Location တို့ ပါရှိ တတ် ပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ ဖုန်းဟာ အိမ်မှာ ရှိနေရင် လုံခြုံတယ်လို့ သတ်မှတ် ထားနိုင်ပြီး မျက်နှာ ပြင်ကို ပွတ်ဆွဲ တာနဲ့ Unlock ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပြင် သွားရင် တော့ ဖုန်းကို Unlock လုပ်ဖို့ PIN, Pattern တို့ကို တောင်း ဆိုမှာပါ။ Trusted Devices ကလည်း ဒီလို ပါပဲ။ Bluetooth, NFC ဆက်သွယ် မှုများ ကနေ သင့်ရဲ့ ဖုန်ုးဟာ သင့်ရဲ့ စမတ် နာရီ ၊ တက်ဘလက် တို့နဲ့ ချိတ်ဆက် နေတယ် ဆိုရင် ဖုန်းဟာ လုံခြုံတဲ့ အခြေ အနေမှာ ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ် ထားနိုင် ပါတယ်။
Trusted Face ကတော့ ဖုန်းရဲ့ အရှေ့ ကင်မရာက သင့် မျက်နှာကို တွေ့မြင်နေ ရရင် အလွယ် တကူ Unlock ပြုလုပ် နိုင်မှာပါ။ On-Body Detection က သင့်ရဲ့ ဖုန်းဟာ သင့်လက်ထဲ ဒါမှ မဟုတ် အိတ်ကပ် ထဲမှာ ရှိနေ တာကို သိရှိပြီး ဖုန်ုးကို စားပွဲပေါ် သို့မဟုတ် တစ်နေရာမှာ ချလိုက် တာနဲ့ Lock ပြုလုပ် ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Remote Security အတွက် Android Device Manager ကို အသုံးပြုပါ။
Google Play Service ဟာ Google ရဲ့ Android Phone တွေမှာ ထည့်ပေး ထားတဲ့ ၀န်ဆောင် မှုတွေ အားလုံးကို စီမံ ခန့်ခွဲ ပါတယ်။ Google က Play Service Framework ကို နောက်ကွယ် ကနေ အမြဲတမ်း Update ပြုလုပ် ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒါ ကြောင့်ပဲ နဂိုက Android Device Manager မပါတဲ့ ဖုန်ုးတွေ မှာတောင် Play Service ကနေ တစ်ဆင့် ထည့်သွင်း ပေးနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Android Device Manager က သင့်ရဲ့ ဖုန်းပျောက် သွားရင် ဖုန်းရဲ့ တည် နေရာကို ခြေရာ ခံတာ၊ Ring သံမြည်အောင် လုပ်ပေး တာနဲ့ ဖုန်းမှ အရေးကြီး ဒေတာ များကို ဖျက်ပေး တာတို့ကို ပြုလုပ် ပေးနိုင် ပါတယ်။
Default အားဖြင့် Android Device Manager က သင့်ရဲ့ ဖုန်း တည် နေရာနဲ့ Ring သံ မြည်အောင်ပဲ ပြုလုပ် ပေးနိုင် ပါတယ်။ အရေးကြီး ဒေတာ တွေကို အဝေး ကနေ ဖျက်ပစ် နိုင်ဖို့ အတွက် သင့်ဖုန်းရဲ့ Main System Settings ထဲသွားပြီး Security ထဲဝင်ပါ။ Device Administrators Option ထဲဝင်ပြီး Android Device Manager ကို အမှန်ခြစ် ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ ဖုန်းပျောက် သွားရင် Android Device Manager ကို အသုံးပြုပြီး ဖုန်းကို ပြန်ရှာနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ ရှိပါတယ်။ သင့်မှာ Android Device တစ်ခုပဲရှိရင် https://www.google.com/android/devicemanager ၀က်ဆိုက်ကိုသွားပြီး သင့် Google Account နဲ့ Login ၀င်ပါ။ အဲဒီဝက်ဆိုက်ကနေ ဖုန်းရဲ့ တည်နေရာကို မြေပုံမှာ ကြည့်တာ၊ အိမ်မှာ ပျောက် နေတာ ဆိုရင် Ring သံ မြည်ခိုင်း တာတို့ ကို ပြုလုပ် နိုင်သလို ဖုန်းကို Lock ပြုလုပ် တာနဲ့ အရေးကြီး ဒေတာ များကို ဖျက်ပစ် တာတို့ကို ပြုလုပ်နိုင် ပါ တယ်။ သင့်မှာ အခြား Android Device တစ်ခု ရှိရင် Android Device Manager App ကို ထည့်သွင်းပြီး ပျောက်နေတဲ့ ဖုန်းကို ရှာဖွေနိုင် ပါတယ်။
Android Users များဟာ Screen Recording လုပ်ဖို့ အတွက် အရင်တုန်း ကတော့ Root ပြုလုပ် ကြရ ပါတယ်။ Android 5.0 Lollipop မှာတော့ Root လုပ်စရာ မလိုဘဲ Screen Recording လုပ်နိုင် ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြုလုပ်ဖို့ App တစ်ခုသာ လိုအပ် ပါတယ်။ Google Play Store မှာ Screen Recording ပြုလုပ်တဲ့ အခမဲ့ App များစွာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ အနှစ် သက် ဆုံး တစ်ခုက Rec ဖြစ် ပါတယ်။
Data Usage ကို စောင့်ကြည့် ရုံသာ မက ထိန်းချုပ်ပါ။
Android မှာ Data Usage ကို စောင့်ကြည့် နိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ပါရှိ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် User အများ စုက ထိထိ ရောက် ရောက် အသုံး မပြုကြ ပါဘူး။ သာမာန် အားဖြင့် အချိန် ကာလ တစ်ခု အတွင်းမှာ သတ်မှတ် ထားတဲ့ Data Usage ရောက်ရင် Warning ပေးဖို့သာ ပြုလုပ် ထားကြ ပါတယ်။ Limit ပြုလုပ် ပေးမှသာ သတ်မှတ် ထားတဲ့ ပမာဏ ရောက်ရင် Mobile Data ကို အလို အလျှောက် ပိတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Settings> Data Usage ထဲသွားပြီး Limit Check Box မှာ အမှန်ခြစ် ပေးပါ။ အနီရောင် မျဉ်းကြောင်းကို အပေါ်၊ အောက် ရွှေ့ပြီး သတ်မှတ် ပေးပါ။ Warning ကိုတော့ Limit ပမာဏ ထက် MB တစ်ရာ လောက် လျော့နည်းတဲ့ နေရာမှာ သတ်မှတ် ထားသင့် ပါတယ်။
ကဏ္ဍ နည်းပညာဆောင်းပါး, ဖုန်းနည်းပညာ